Woodside Lodge kwi Pines of Parks
Wamkelekile eWoodside Lodge. Le ndlwana intle ibekwe kwiPines of Parks, AZ. Ifakwe kwipayina emide ye-ponderosa kunye nokubuyela kwihlathi lesizwe, eli khaya lihle ligqunywe ngamaplanga linayo yonke into oyifunayo. Ivuliwe
Igumbi elikhulu, ikhitshi elimiswe kakuhle, indawo yomlilo kwigumbi lokuhlala, amagumbi okulala amakhulu kunye nepatio entle ngasemva kwekhaya eneebhentshi ezi-2 zepikniki kulo lonke ulonwabo. Iveranda engaphambili yogqunywe zizitulo ezishukumayo. Le 2 BR, 1 BA iya kuhlalisa ukuya kulala abantu abasi-7.
Imizuzu eli-15 ukusuka eWilliams, eAZ (iGrand Canyon Railway)
Imizuzu eyi-13 ukuya eBearizona
Imizuzu eli-15 ukusuka eFlagstaff, eAz.
Imizuzu engama-30 ukuya e-Arizona Snowbowl
Iikhilomitha ezili-9 ukuya kwiFama yeDeer yaseGrand Canyon
PHAMBI kokuba UBHEKILE:
Ikhabhini ijikelezwe ziiponderosa pines ezinde kwaye kunokubakho iinkonzo ze-intanethi ezilinganiselweyo. Sisebenzisa i-Verizon boost ekuvumela ukuba usasaze iimuvi kwaye ube ne-intanethi kodwa ayinakubalwa ngamaxesha onke. Kusetyenziso lwe-intanethi olusisiseko lomsebenzi kwilaptop (hayi ukudlala) une-intanethi eyomeleleyo kodwa ngamanye amaxesha inkonzo iyacotha emva kwexesha lesidlo sangokuhlwa (ukusasazwa kwevidiyo kunokuthi kwenzeke). Ulwamkelo lweselfowuni ngokuxhomekeke kwinkonzo yakho mhlawumbi imbi. Sikwindawo yokuphakama engama-7,000 enemithi emininzi ke inokuba yingxaki kuwe. Ababhalisi beVerizon abanayo imiba ngolwamkelo kuba sine-booster cell. I-AT&T kunye ne-T Mobile inokuba yingxaki.
Kukho kwakhona indawo yebhonfire enokusetyenziswa ngokuxhomekeke kwimithetho yendawo. Nceda ujonge kummkeli wakho.
IWoodside Lodge ihleli kwi-acre yomhlaba eyi-1.0. Ngeembono ezimangalisayo, iisilingi ezinyukayo, kunye nendawo enobungangamsha yokubasa iinkuni, iWoodside yindawo entle yokuphumla ekude nomsebenzi okude, iqhina losapho (ikhabhinethi inokulala i-5 ngokukhululeka - okanye ngaphezulu, kwabo bazimisele ukuyi “rhabaxa” kwisofa ehleli kamnandi. ), okanye ixesha lokuphinda uqhagamshelane nabahlobo okanye wena nje.
Ubusuku ngabunye obucacileyo, obuneenkwenkwezi (ezo iArizona yaziwa ngazo), buyela kumgangatho omkhulu ongasemva ngengubo yakho yoboya beSherpa ethandekayo kwaye ujonge esibhakabhakeni (jonga isibhakabhaka!) Utyhutyhe imipayini yePonderosa, ufunxa ukuzola komnye weMelika. awona mahlathi mahle, amangalisayo esizwe. Xa kukho ingqele emoyeni, khanyisa izigodo kumngxuma womlilo wangaphandle kwaye wenze ezinye iinkumbulo phezu kwe-s'mores (okanye i-cocoa yabantwana), okanye ungene ngaphakathi kwaye ubukele amahlwantsi ekhephu ewa ngeefestile zemifanekiso ecocekileyo ukuze ufumane amava. ubomi bonke.
Amagumbi okulala amabini, ibhafu enye
1,200-sq-ft ikhabhathi kwi-acre eyi-1
Bonke ubutofotofo basekhaya
Ukufikelela ngokulula kwi-I-40 ( 3 imiz)
Iimayile ezi-1 ukusuka kwiiPaki kwiiPines General Store kunye neDeli (ukutya okukhulu kwendawo)
Iibhloko ezimbalwa ukusuka kwimbali yeRoute 66
I-Woodside Lodge ixhotyiswe nge-alam yokhuseleko kunye neekhamera zokhuseleko ngaphandle kwendlu.
Ikhabhinethi iyonke onayo - phantse phantse!! Igumbi lokulala eli-1 litshixiwe kwizinto zomntu zomnini, ishedi itshixiwe kunye ne-RV camper (ayinanto).
-Amanzi ayasiwa kwipropathi kodwa sihlala siqinisekisa ukuba kukho amanzi amaninzi ngenani leendwendwe ezihlalayo.
-Igesi yepropane iyahanjiswa kodwa sinetanki yegesi kwindawo
-Inkqubo yetanki yeSeptic
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Parks